नेपालले भारतीय हेलिकप्टर खसालेर पाइलट क’ब्जामा लिए” भन्दै भारतमा रुवाबासी ! (भिडियो हेर्नुस्) – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालले भारतीय हेलिकप्टर खसालेर पाइलट क’ब्जामा लिए” भन्दै भारतमा रुवाबासी ! (भिडियो हेर्नुस्)
नेपालले भारतीय हेलिकप्टर खसालेर पाइलट क’ब्जामा लिए” भन्दै भारतमा रुवाबासी ! (भिडियो हेर्नुस्)
नेपाल भारत सिमा विवाद चलिरहको बेलामा अहिले भारतीय मिडियामा अनेक हल्ला चलाइएको छ । भारतीय मिडिया तल्लो स्तरमा ओर्लिएर टिप्पणी गरेका छन् । यसैबीच भारतमा एक गलत हल्लाले सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ ।
विदेशमा अलपत्र दुई सय ६० नेपाली आज स्वदेश फर्किए